टिका सानुलाई सुटिङमै पखाला चलेपछि शिशिर भण्डारीले जिस्काए ! टिका र शिशिर फेरी इन्द्रेणीमा दोहोरी भिड्दै (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > टिका सानुलाई सुटिङमै पखाला चलेपछि शिशिर भण्डारीले जिस्काए ! टिका र शिशिर फेरी इन्द्रेणीमा दोहोरी भिड्दै (भिडियो हेर्नुस)
गायिका टिका सानुले हालसालै तीज गीत ल्याएकी छिन् । उनले ल्याएको बुहारी बोलको तीज गीतलाई निकै रुचाइएको छ । यो गीतको भिडियो युटुव ट्रेन्डिङ्गको पहिलो नम्वरमा आउन सफल भयो । पछिल्लो समय ट्रेण्डिँग गर्ल भनेर पनि टिकालाई चिनिन्नछ कारण उनले गाएका लाईभ दोहोरीहरु एकपछि अर्को युटुबको ट्रेण्डिँगमा रहन्छन् ।
यसैबिच तीज गीतको सफलतासँगै शिशिर भण्डारीले टिका सानु र मानसिँह खड्का सहित बुहारी भाग २ को टिमसँग भलाकुसारी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा टिका सानुले आफुलाई गीतको छायाँकनमा पखाला लागेर गाह्रो भएको बताईन् । यस्तै उनीहरुले गीबाट आएको रकम सामाजिक कार्यमा खर्चने बताए । भिडियो हेर्नुस
बिहिबार राती भूकम्पको धक्का, कहाँ कस्तो रह्यो असर? हेर्नुस्